सरकारले कोरोना रोकथाममा गरेको खर्च सार्वजनिक गर्दा विवरणले उब्जाएको आशंका (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
काठमाडौं, ३२ जेठ । कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका नाममा सरकारले गरेको खर्च विवरण देशभर खोज्न थालिएको छ । देशका मुख्य–मुख्य शहरहरुमा प्रदर्शन पनि भए ।
यही दबाबपछि सरकारले ८ अर्ब बढीको खर्च विवरण सार्वजनिक ग-यो । तर, यो खर्च विवरण आफैं प्रष्ट छैन । खर्च सार्वजनिकको प्रक्रिया मिलाइएको छैन । सरकारले नै यसअघि करिब दश अर्ब रकम बराबरको खर्च भएको बताएको थियो ।
कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकारले चालेका कदमप्रति जनताको आक्रोश बढ्दै गएको छ । क्वारेन्टाइनहरु व्यवस्थित छैनन्, लकडाउनले आम मानिसहरु काम विहीन बनेका छन्, पाउनुपर्नेले राहत पाएका छैनन् । यस्ता समस्याहरु बढ्दै गएपछि सरकार विरुद्धको आक्रोश अस्वभाविक होइन ।
कोरोना महामारी नियन्त्रणका नाममा भएका खर्च सार्वजनिक गर्न सरकार किन हिच्किचाउँदैछ रु प्रश्न उठेका छन् । एक पाने विवरण सार्वजनिक गर्दैमा सरकारप्रतिको विश्वास बढ्ला त ? फेरि प्रश्न गर्न थालिएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको खर्च विवरण यस्तो छः
१– संघीय संचित कोषबाट श्रोत व्यवस्थापन गरिएको रकम खर्च गर्ने निकायहरुः
हालसम्म भएको खर्च,
१– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय १ अर्ब ५८ करोड ५२ लाख ८३ हजार,
२– रक्षा मन्त्रालय २ अर्ब ४० करोड २४ लाख ५७ हजार,
३– गृह मन्त्रालय २ करोड ४५ लाख ८८ हजार
४– परराष्ट्र मन्त्रालय शून्य
५– संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय ५ करोड २० लाख
६– शहरी विकास मन्त्रालय १ करोड ४२ लाख
७– शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय (प्रविधि विकास र वैकल्पिक सिकाई) २ करोड ६९ लाख ७८ हजार
जम्मा खर्च ४ अर्व १० करोड ५५ लाख ६ हजार
शीर्षक अनुसार रकम निकासा
१. औषधि स्वास्थ्य सामग्री ३ अर्व ९० करोड ८८ लाख
२. स्वास्थ्य पूर्वाधार १ अर्व १२ करोड ५० लाख
३. जनशक्ति परिचालन ५ करोड ८३ लाख ३३ हजार
४. क्वारेन्टाइन १३ करोड ५५ लाख ९८ हजार
५. अन्य ४० करोड १५ लाख ९ हजार
जम्मा निकासा गरिएको रकम ५ अर्व ६२ करोड ९२ लाख ४० हजार
२– प्रदेश सरकारतर्फबाट भएको खर्च र कोषमा भएको रकम
प्रदेश नं. १ : खर्च १९ करोड ३५ लाख ६० हजार –कोषमा २९ करोड ४९ लाख २८ हजार
प्रदेश नं. २ : खर्च १३ करोड ३९ लाख ४६ हजार – कोषमा २६ करोड ६५ लाख ६९ हजार
बाग्मती प्रदेश : खर्च १३ करोड ६७ लाख ४२ करोड – कोषमा ९६ लाख ६४ हजार
गण्डकी प्रदेश : खर्च १५ करोड ४२ लाख १० हजार – कोषमा १८ करोड ३ लाख १२ हजार
प्रदेश नं. ५ : खर्च ७ करोड ७९ लाख ३० हजार– कोषमा १५ करोड ६ लाख १७ हजार
कर्णाली प्रदेश : खर्च २३ करोड ९२ लाख ८३ हजार ÷ कोषमा २५ करोड ४४ लाख ३६ हजार
सुदूर–पश्चिम प्रदेश : खर्च ३६ करोड ४८ लाख ७० हजार – कोषमा ४२ करोड ५७ लाख २७ हजार
जम्मा १ अर्व ३० करोड ४ लाख ९९ हजार २ अर्व २२ लाख ५३ हजार
३० स्थानीय तहबाट भएको खर्च
स्थानीय तह खर्च भएको रकम २ अर्व ९८ करोड ५१ लाख ९४ हजार छ भने कोरोना कोषमा ४ अर्व ८३ करोड २७ लाख १५ हजार देखाइएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको सीसीएमसीले शनिबार सार्वजनिक गरेको खर्च विवरण स्पष्ट छैन । यो विवरणमा खर्च कहिलेसम्म भएको हो भनेर उल्लेख छैन । पाँच वटा शीर्षकमा खर्च भएको देखाइएको छ र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खर्च भएको भनिएको छ ।
तर, मिति र समय तोकिएको छैन । सामान्यतया खर्च विवरण सार्वजनिक गर्दा महिना र दिन समेत तोकिनुपर्छ । विवरणमा भने बमोजिम औषधि तथा स्वास्थ्य सामाग्री के के हुन् रु कहाँ–कहाँ स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गरियो ? क्वारेन्टाइन निर्माणमा कति–कति, कसरी खर्च भयो ? उल्लेख छैन ।
यस्तै ‘अन्य’ नाम दिइएको शीर्षकले के जनाउँछ रु भन्ने पनि आम मानिसको प्रश्न हो । प्रदेश र स्थानीय तह आफैं संघले रकम दिएनन् भनेर पटक–पटक गुनासो गर्दैछन् । कुन प्रदेशलाई कति दिइयो रु यो प्रश्न पनि अनुत्तरित छ ।
यसलाई गत जेठ २० गते उपप्रधानमन्त्री पोखरेलकै नेतृत्वमा रहेको कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिले कूल ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको भनेको थियो । तर, भनाइ र गराई फरक पर्दा खर्च घटेको छ, यसले पनि प्रशस्तै अनियमितताको शंकालाई बल पु¥याएको छ ।
कोरोना रोकथाममा गरेको खर्च सार्वजनिक गर्दा विवरणले उब्जाएको आशंका
कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका नाममा सरकारले गरेको खर्च विवरण देशभर खोज्न थालिएको छ । देशका मुख्य–मुख्य शहरहरुमा प्रदर्शन पनि भए । यही दबाबपछि सरकारले ८ अर्ब बढीको खर्च विवरण सार्वजनिक ग¥यो । तर, यो खर्च विवरण आफैं प्रष्ट छैन । खर्च सार्वजनिकको प्रक्रिया मिलाइएको छैन । सरकारले नै यसअघि करिब दश अर्ब रकम बराबरको खर्च भएको बताएको थियो ।
Posted by News24 Nepal on Sunday, June 14, 2020
अमर काफ्ले इनरुवा, १९ साउन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा कार्यरत प्रहरी जवानमा कोरोना भाइरसको